Cool Emerald: RS232-RS485 Converter
တစ်ခါတလေ ကွန်ပျူတာ ရဲ့ serial port က RS232 ကနေ RS422 သို့မဟုတ် RS485 ပြောင်းသုံးဖို့ လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ RS485 သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့ လှမ်းပြီးဆက်သွယ်ဖို့ လိုလာရင်ဖြစ်ဖြစ် RS485 converter များကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ နမူနာအဖြစ် IC-485SN ဆိုတဲ့ bidirectional converter တစ်ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ပထမပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း သူ့ရဲ့ အသုံးပြုပုံကို ခလုပ်လေးနှစ်ခု ကိုသုံးပြီး လိုသလို configure လုပ်သုံးလို့ရပါတယ်။
ပထမ ခလုပ်က device mode ကို ရွေးဖို့ပါ... RS232 ဖက် (DB25 Female connector ရှိတဲ့ဖက်) က ကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတ် Data Terminal Equipment တစ်ခုခု) ဆိုရင် DTE မှာထားပါ။ ဒါမှမဟုတ် modem အစရှိတဲ့ device (data communication equipment) တစ်ခုခု ဆိုရင် DCE မှာ ထားဖို့လိုပါတယ်။
ဒုတိယ ခလုပ်ကတော့ transmitting and receiving mode ကို ရွေးဖို့ပါ။
1. TxON, RxON Mode
TxON, RxON ကို point to point operations တွေအတွက် သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အမြဲတမ်း transmit driver က enable ဖြစ်နေပြီး၊ အမြဲတမ်းလဲ receiving လုပ်နေမှာပါ။ RS232 ကနေ RS422 ပြောင်းပေးတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ RS232 ဖက်မှာ RTS နဲ့ CTS၊ DTR နဲ့ DSR တို့က loopback ဆက်နေပါတယ်။
RS485 ဖက်မှာကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Pin 1 = Tx+
Pin2= Tx-
Pin3= Rx-
Pin4= Rx+
2. TxRTS, RxON Mode
TxRTS, RxON ကို multidrop operations တွေအတွက်သုံးပါတယ်။ အမြဲတမ်း receiving လုပ်နေပေမယ့် RTS ကို high ပေးမှ transmit driver က enable ဖြစ်ပြီး ဒေတာ ပို့လို့ရပါတယ်။ DCE အတွက်ဆိုရင် RTS အစား CTS ကိုသုံးရမှာပါ။ ဝါယာလေးခုသုံးတဲ့ RS485 full duplex အဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ RS232 ဖက်မှာ RTS နဲ့ CTS၊ DTR နဲ့ DSR တို့ကလည်း loopback ဆက်နေပါတယ်။
3. TxDTR/RTS, RxDSR/ON Mode
TxDTR/RTS, RxDSR/ON ကို RS485 half duplex အဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ DTE အတွက်ဆိုရင် RTS က true ဖြစ်မှ data lines တွေနဲ့ busy lines တွေရဲ့ transmit driver တွေက enable ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ DTR ကို true ပေးရင် busy ဖြစ်ကြောင်း transmit လုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ busy ဖြစ်ကြောင်း receive ရရှိမယ်ဆိုရင် DSR မှာ true ပြမှာပါ။ DCE အတွက်ဆိုရင် RTS အစား CTS ဖြစ်ပြီး၊ DTR နဲ့ DSR ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။ RS232 ဖက်မှာ RTS နဲ့ CTS တို့က loopback ဆက်နေပါတယ်။
Pin 1 = Data+
Pin2= Data-
Pin3= Busy-
Pin4= Busy+
DB9female နဲ့ DB25 male Cable ရဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
Female DB9 -------------- Male DB25
pin 1 ---------------------- pin 8 .......... Black
pin2---------------------- pin3.......... Brown
pin3---------------------- pin2.......... Red
pin4---------------------- pin 20 ........ Orange
pin5---------------------- pin7.......... Yellow
pin6---------------------- pin6.......... Green
pin7---------------------- pin4.......... Blue
pin 8 ---------------------- pin5.......... Magenta
pin9---------------------- pin 22 ........ Gray
Posted by Yan Naing Aye at Sunday, May 04, 2008
Labels: Com, Communication, DB25, DB9, Electronics, hardware, Interface, RS232, RS422, RS485, Serial, Transceiver